RAVATOMANGA ROLAND : MISY FETRANY NY ZAVATRA REHETRA, HIPOAKA NY SARO-BILANY KA MITANDREMA IANAREO. – MyDago.com aime Madagascar
Amin’ny maha lehiben’ny delegasiona movansa Ravalomanana ahy hoy Ravatomanga Roland teny amin’ny Magro Behoririka androany dia manamafy amintsika rehetra fa tsy misy mizaram-bazana velively fa miray hina, ny mpitarika ny movansa Ravalomanana ary manohana ny dokotera Robinson. Ny hafatra ataoko amintsika vahoaka hoy izy dia aoka tsy hisy hanavakavaka isika, fa eto amin’ny Magro dia mirahy hina mampianatra ny vahoaka. Lainga sy fanosoram-potaka hoy izy raha misy miteny fa mizaram-bazana. Efa nandray baiko avy amin’ny filoha Ravalomanana ny tenako hoy Ravatomanga rehefa notendrena ho lehiben’ny delegasiona. Tsy manilikilika an’iza n’iza ny movansa Ravalomanana fa aoka hazava izay. Toky hoy izy no omenay anao dokotera Robinson, miaraka aminao izahay , tsyhandao anao izahay fa hiara hitolona. Manomboka androany dia tsy misy mialangalana fa anjaranay mirahalahy no maka ny fanapahankevitra.
Fanombohana ny antsika androany hoy izy fa ny fandresena dia eo am-pelantànantsika mandrakariva ary mipetraka ho filoham-pirenena ny dokotera Robinson. Tianay hoy izy ny mahampafantatra anareo fa afakomaly rehefa nangatahan’ny Ces ny lasaka iray mitahiry ny bileta avy amin’ny urne iray, izay nisy filasalasalana araka ny fangatahantsika. Rehefa nosokafan’izy ireo tao amin’ny Ces io kitapo io dia niara nitolagaga, kivy izy rehetra fa bileta hosoka daholo ny ankabeazany tao. Izay indrindra hoy izy no hanaovako antso avo lehibe indrindra.
Ho an’ny mpitsara ao amin’ny Ces : Mbola mahatoky anareo izahay hoy Ravatomanga hatramin’izao. Tohizo ny ezaka tsara ataonareo, ary avoahy ny marina fa tsy hijanona, tsy hangina ny vahoaka Malagasy raha tsy mivoaka hatramin’ny farany ny marina. Sanatria tsy mampitahotra izahay hoy izy fa mampitandrina anareo mpitsara namana ao amin’ny Ces izahay. Tandremo sao sanatria manaonao foana. Andriamanitra tsy andrin’ny hafa , andrinay ihany. Manamafy izahay vahoaka Malagasy fa mitaky , ary tsy hijanona hitaky raha tsy mivoaka ny marina.
Ho an’ny sehatra iraisam-pirenena : Mitodika aminareo ambasady solontena isankarazany avy amin’ny fikambanam-be iraisampirenana. Niresaka tamin’ny sasantsasany taminareo izahay, niresaka tamin’ny biraom-pifandraisan’ny Sadc, tao anatin’ny rao na telo andro. Gaga sy talanjona izahay hoy ity olomboantendry ity raha naheno ny vavan’ny sasany taminareo. Misy ny matahotra an’Andriamanitra aminareo, mahatoky anareo izahay satria samy mahatoky an’Andriamanitra isika. Nisy hoy izy ny sahy niteny hoe mahaleo tena tanteraka ary tsy azonay hidirana ny asan’ny Ces. Mampatsiahy kely anareo izahay hoy Ravatomanga fa tammin’ny Ces voalohany, raha nanambara izyireo fa azo ekena ary namoaka didim-pitsarana ny Ces voalohany fa azo fidiana I neny Lalao Ravalomanana. Ianareo sehatra iraisam-pirenena dia nampalahelo fa dia nanaiky ary nitsabaka tamin’ny raharahan’ny Ces ary niteny ravao io Ces io fa tsy mahavita azy. Izao ve ianareo hoy izy dia sahy miteny fa tsy sahy miditra na amin’inona na amin’inona rehefa raharaham-pirenenay. Tsy ekenay izany fa hanaovanay antso avo aminareo fa ny lalàna dia tokony hampiharina. Aoka hoy ity lehiben’ny delegasiona movansa Ravalomanana ity ny lalàna manontolo no hampiharin’ny Ces. Tsotra hoy izy no antony hanaovanyizany antso avo izany satria ny voalazan’ny lalàna , rehefa namoaka lalàna ny Ces dia tsy azo ivalozana. Tamin’ny Ces voalohany dia natosikareo izahay handrava ny Ces voalohany, tsy nekenareo ny didy navoakany , ary amin’ity dia miteny izahay fa raha sanatria manaonao foana ny Ces dia mangataka anareo sehatra iraisam-pirenena hanohana any, ravao izay didy havoakan’ny Ces eo. Fangatahana avy amiany vahoaka izany satria tsy hijanonana izahay raha manaonao foana ny Ces raha didy mandeha amin’ny tsy izy no hivoaka, koa miala tsiny , miala fondro fa tsy hijanona izahay fa hijoro hitaky ny fahamarinana hatramin’ny farany. Mitodika Ihany koa main’ny biraom-pifandraisan’ny Sadc manokana izahay hoy Ravatomanga, araho maso izay ataon’ny Ces eo fa matoa ianareo mipetraka eto dia hanampy anay hampihatra ny lalàna. Efa be dia be izay didy nohitsakitsahana izay tao anatin’ny tondrozotra. Misy fetrany ny zavatra rehetra hoy izy, hipoaka ny saro-bilany ka mitandrema ianareo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 janvier 2014 Catégories Politique
2 réflexions sur « RAVATOMANGA ROLAND : MISY FETRANY NY ZAVATRA REHETRA, HIPOAKA NY SARO-BILANY KA MITANDREMA IANAREO. »
17 janvier 2014 à 5 h 06 min
Ny resultat avaoka ny ces efa fantatra,fa ny antsika mba aohana sa efa mamoaka resultat ny ces vao iheritreritra zay stragie manaraka indray,dia miandry top avy any Sud Afrique vao anao zavatra,tsika no mahita ny eto dia mandray andraikitra aingana
Tonga ilay nandrasana ka tairo amin’izay aryeee.Raha vao mampiasa hery ny EMMOREG tonga dia chasse à l’homme(hitatsika ny fonenany ny vady aman_janany)
Aza mety ho feheziny devoly izany mihintsy
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA : AZA MIHEMOTRA MIHITSY ISIKA EO ANOLOAN’NY SAROTRA FA IZAY IHANY NO HAHAZOANA FANDRESENA
Suivant Article suivant : Dr ROBINSON : Mampitandrina ireo zatra mangalatra fahefana nandritra ny dimy taona, bois de rose, vatosoa ary mitady hangalatra ny safidim-bahoaka